China Door Lock Slot Machine Milling mveliso kunye nabenzi | Gladline
Ingcango yokutshixa indawo yokugaya umatshini ine-spindle eyodwa kunye nohlobo lokuluka kabini.
Umnyango weSitshixo wokuTshiza wokuSebenza sisixhobo esibaluleke kakhulu koomatshini bokhuni. Isetyenziselwa ukuguba kunye nokumba kwindawo yeenqwelomoya nakwimilo yesitshixo ecaleni leengcango zomthi.
Max yokugaya ubude 220 mm
Ubukhulu bokugaya ubuninzi I-120 mm
Max yokugaya ububanzi I-30 mm
Ukuphakama kokuphakama kokusebenza 100 mm
Isantya othini Main I-1000 r / m
Amandla 0.75 / 1.1 kw
Umatshini wokutshixa i-Door Lock sisixhobo esibaluleke kakhulu koomatshini bokhuni. Isetyenziselwa ukucwangciswa kweengcango zomthi, izakhelo zeminyango, iifestile zefestile, ii-sash slots, izitshixo zeminyango, amanyathelo okutshixa ucango, iihenjisi zokutshixa ucango, kunye nokugqitywa kwexesha elinye; esetyenziselwa iinqwelomoya zomnyango kunye namacala Isitshixo semilo yokugaya kunye nokugrumba indawo yokwenza isetyenziselwa ukusetyenziselwa kunye nokubhola ifanitshala yeplanga; ngokufanelekileyo nangokuchanekileyo ukulawula ukusetyenziswa kunye nokuveliswa kweendawo zokutshixa umnyango kunye neehenjisi.
Umatshini wokutshixa i-Door Lock uhlala ubunjwe zizinto ezinje ngezixhobo zokugaya, iindawo zokugaya, iitafile zomsebenzi, iimoto, kunye neeseti zokumba ezinesantya esiguqukayo. Ezi zinto zoomatshini zinemisebenzi yazo kunye neempawu. La macandelo asebenza ngokusondeleleneyo, ayalungelelana, kwaye azimele geqe; Umqhubi ngokubanzi uyakwazi ukwenza imisebenzi elula ngokusebenza kakuhle kakhulu.
1. Umatshini wokuTshixa umnyango wenziwe ngeplate yentsimbi ekumgangatho ophezulu ngokugoba nokwenza, eqhutywa ngonyango lobushushu obuphezulu.
2.Ukuma kwenqwelomoya kunye nokumila komngxunya wesitshixo kwenziwa ngokulingisa ukugaya, kwaye ukungunda kunokwenziwa yi-MDF, efanelekileyo nefanelekileyo.
3. Imijelo emide kunye nemifutshane yomngxunya wokutshixa ucango lomthi ilawulwa kukuguqulwa kwamaxesha, ivili elijingayo lijikeleza emva naphambili, kunye nesixhobo esikhethekileyo sokubekwa sinokuqonda ukugaya okuzenzekelayo nokubumba.
4. Ukutyibilika kwesilayidi esithe nkqo nesithe nkqo, samkela isikhokelo somgama wesikwere, ukuchaneka okuphezulu, ingxolo ephantsi, enovakalelo kwaye ethembekileyo, ubomi benkonzo ezinzileyo kunye nobude.
5. Isixhobo sokusika samkela isixhobo esitsha sokusika, esibukhali. Iseti yemoto eguqukayo yokusetha isantya iqwalaselwe kwaye isetyenzisiwe, kwaye isiphumo sihle kakhulu.
6. Isixhobo sokucinezela samkela isilinda somoya sokucinezela, esibuthathaka nesithembekileyo.
7. Uhlengahlengiso olulula kunye nokusebenza, ukugcina ixesha kunye nomzamo.
8. Ikhuselekile kwaye inokuthenjwa, okoko iswitshi singacinezelwa ngokuqinileyo ngexesha lokusebenza, onke amandla awakwazi ukuqalwa. Xa ukungaqheleki kwenzeka ngexesha lomsebenzi, kuya kuyeka ngokuzenzekelayo.
Ulondolozo lwemihla ngemihla:
(1) Jonga iibholiti zokubopha kunye namandongomane kuyo yonke indawo, kwaye uziqinise.
(2) Jonga unxibelelwano lombutho ngamnye, kwaye ususe nakuphi na ukungaqheleki. Lubricate iinxalenye zonxibelelwano ezibiweyo.
(3) Jonga inkqubo yomoya.
(4) Jonga inkqubo yombane: Emva kokuvula amandla, jonga icala lokujikeleza kwemoto.
(5) Gcina izixhobo zicocekile kwaye ucoce ubumdaka ebhentshini yokusebenza.
Egqithileyo Ihenjisi Umatshini uyadika
Okulandelayo: Ibhendi yabona